Fanampiana An-davitrisany Taorian’ny Horohorontany Tao Japana No Tsy Tonga Tany Amin’Ireo Tra-boina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2013 8:36 GMT
Gazety lehibe iray ao Japana no namoaka fa yen an-davitrisany natokana ho amin'ny fanampiana ireo olona tra-boina tamin'ilay horohoron-tany mahery vaika izay nitarika ilay tsunami nahazo ny faritra Avatra atsinanan'i Japana ny taona 2011 no nampiasaina taminà tetikasa izay tsy nahazoan'ireo tra-boina ireo tombontsoa mihitsy.
Ny Asahi Shimbun dia nanambara fa natokana hanampiana ireo very trano sy very asa tamin'ilay Horohorontany Lehibe Tao Japana Atsinanana na “Great East Japan Earthquake” ny yen 200 miliara (roa miliara amin'ny dolara Amerikana) izay tetibolan'ny governemanta, ny antsasa-manila mahery tamin'izany no nampiasaina ho an'ireo prefektiora 38 hafa ankoatr'ireo sivy izay tena voa mafy tao amin'ny faritr'i Tohoku.
Nampiasaina ilay tetibola natokana ho an'ny asa maika, ho an'ireo ekipa miasa manisa soka-dranomasina, fampisehoana iraisampirenena “manga” mampihomehy iray, ary fanentanana irey ho fampahafantarana ny prefektioran'i Yamaguchi narahanà maskoty iray manana volo miloko maintso antsoina hoe Choruru.
Nahatonga resabe teo amin'ireo mpampiasa tambajotra sosialy izany familiana làlana ny vola tokony ho an'ny fanarenana izany.
Mpampiasa Twitter iray @2_happy no naneho ny heviny tamim-pahadisoam-panantenana :
@2_happy : Biraom-panjakana sy ireo manampahefana ve no mahavita manao zava-doza toy izany amin'ity firenena ity. Afaka ny antsoina hoe mpanao ny tsara hatrany ihany ve ity firenentsika ity? | Iray miliara natokana ho an'ny fanarenana no voahodinkodina
Ilay tonian-dahatsoratry ny cyclingtime.com, vohikala natokana ho an'ireo mpitia bisikileta, dia namely ireo “mpangala-bola” tompon'andraikitra amin'ny fampiasam-bola tsy ara-dalàna tao amin'ny Twitter. Niverimberina nalefa in-200 ilay fanehoan-kevitra :
@cyclochabumaro: Olona maherin'ny 65.000 no voaray hiasa avy amin'ny prefektiora 38 samihafa mba hanao ny asa fanarenana, ary 3% amin'izy ireo ihany no mponina avy ao amin'ny toerana nitrangan'ny loza. 97% avy any an-toeran-kafa. Azafady. manadala ahy ve ianareo izany, natao hanampiana ny tra-doza anie io e. Maro be ireo mpangala-bola no manao izay hinoan'ny olona fa mitsetra sy manampy ny mpiray monina aminy izy ireo.
Shingo Nishinari (@shingo_ghetto), mpanao rap fanta-daza amin'ny fanakianany mpanao politika, no nilaza hoe :
@shingo_ghetto : Mandiso fanantenana. Fanondinkodinam-bola tsy azo leferina. Ministera sy sampan-draharaha mamorona fialàna olana mba hahazoam-bola. Fikambanana sy vondrona tsy mifadi-trovana milefa miaraka amin'ny vola. Maniry mafy aho ny hisian'ny tena fanarenana marina.
An-davitrisany ny Tetibola Fanorenana voahodinkodina taminà tetikasa tsy misy ifandraisany amin'izany. Sary nataon'i Keiko Tanaka
Tsy vao izao no nisy tetibola natokana ho an'ny loza voajanahary ho an'ny ” Great East Japan Earthquake” nampiasaina taminà tetikasa tsy misy ifandraisany amin'izany. Kahoku Shimpo, gazetim-paritra ao amin'ny faritr'i Sendai afovoan'i Japana, no nanoratra tamim-pahadisoam-panantenana ny Jona 2011 fa nandray [ja] mpahay mari-trano nasionaly ny governemanta fa tsy mpahay mari-trano avy amin'ny faritra mba hanorina trano fonenana vonjy maika ho an'ireo tra-boina tamin'ny horohoron-tany.
Ary Ilay Gazety Hokkaido dia nanoratra matoan-dahatsoratra [ja] mihitsy ny volana Oktobra 2012 nanakiana ilay vola yen 3.4 miliara natokana ho amin'ny vonjy taitra izay nampiasaina taminà fanamboaran-dàlana tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ilay nosy Okinawa, izay tsy voakasik'ilay horohorontany akory. Mpampiasa Twitter iray inakamon_jiji (@Inakamon_jiji), izay midika hoe lahy antitra eny ambanivohitra, dia naneho ny heviny tamin'ilay matoan-dahatsoratry ny gazety Hokkaido :
@Inakamon_jiji : “Fanodinkodinana ny vola ho an'ny fanarenana, mpitàna birao tsy azo amindràna fo” hoy ilay gazety. Ny tena izy amin'io resaka io dia hoe tsy mahavita azy ny fanjakana amin'ny fitantanana ny firenena. Mivandravandra be fa mila manao zavatra ry zareo mialoha ny hampakarany ny hetra.
Taorian'ilay horohorontany, kiana mivaivay no nahazo ireo masoivohom-pifandraisana sy filazam-baovaom-bahoaka izay voatondro ho nanamaivana ilay raharaha fanodikodinam-bola mba hamatsiana fanentanana hampakarana ny moralin'ny mponina izay nampiasàna olo-malaza tao amin'ny fahitalavitra . Ny taona 2012, ilay bilaogera popo nanoratra [ja] mikasika ny fandaniam-bola be mikararàna tamin'ireo fahitalavitra novatsiana tamin'ny fanaovana fafy kantrana ny vola fanampiana. Nanondro lahatsoratra iray navoakan'ny gazetiboky mpiseho isan-kerinandro Post Seven izay namoaka izany tantara izany tamin'ny Aogositra 2012 [ja] moa ilay bilaogera.
Araka ny voalaza, amin'ireo vola rehetra natokana ho an'ny fanarenana, maherin'ny yen telo miliara no vola nampiasaina taminà dokambarotra fanentanana ho fanohanana ny asa fanarenana. Zara raha nahazo fanampiana avy amin'ny governemanta ny fikambanan'ny mpanjono tra-boina ary ny sasany aza voatery nanajanona ny fandraharahàny mihitsy noho ny tsy fisian'ny famatsiam-bola. Raha toa ka tena mitatitra ny marina tokoa io lahatsoratra io, dia heveriko fa tokony hakatona izao ankehitriny izao ireny foibenà fahitalavitra ireny !
Nitarika fampiakaram-peo nanakiana ilay ampamoaka farany mikasika ny fanodikodinam-bola navoakan'i Asahi Shimbun. Hamaliana ilay fanadihadiana, vinavinain'ny governemanta ny hitaky amin'ny governemantam-paritra sy ireo fikambanana maro ny hanajanonana ny fampiasàna ny vola natokana ho amin'ny fanarenana ary hamerina ireo vola mbola tsy nokitihany any amin'ny governemanta foibe, araka ny voalazan'ilay gazety. Eo an-dalam-panadihadiana izany ankehitriny ny Ministeran’ ny vola.
Tao amin'ilay blogroll esteru.com[ja], mpanoratra iray tsy mitonona anarana no nanakiana ilay drafitra hoe tara loatra. Mpampiasa tsy mitonona anarana maro no niady hevitra tamin'izany, ireto manaraka ireto ny lahatsorany, fanakianana ilay fifanarahana raha toa ka hadisoan'ny fitantanan'ny antokon'ny fitondrana teo aloha “Democratic Party Japan (DPJ) izany na ny ” Liberal Democratic Party (LDP) amin'izao fotoana :
Everiko fa ny LDP no mailaka kokoa nanao io fanodinkodinana ny volan'ny fanarenana io, raha tsy hijery afa-tsy ny fisafotofoton'ny nananganana ny DPJ tampotampoka teo isika. Ary tena azoko antoka mihitsy fa mbola mila tapa-taona ny LDP [taorian'ny nahalany azy ireo ny volana Desambra 2012] hamaliana ny fanontaniana mikasika io fanodinkodinam-bola io.
Tsy azoko mihitsy hoe maninona ny olona sasany no manome tsiny ny LDP. Mihevitra aza aho fa tsy mahalala ny mikasika ny rafitra ara-politika akory izy ireo. Mahita àry aho fa fanehoan'ny LDP ny fahaiza-manaony io resaka fampiasam-bola io. Ny tiako hambara dia Saino tsara :tsy ny LDP no nametraka io tetibola io voalohany. Mazava be fa sarotra ny mamerina vola, indrindra raha ara-dalàna an-taratasy mazava izany.
Ary dia endrikendrehan-dry zareo amin'izany ny DPJ ? sahiko ny miloka fa tsy misy zava-pantany ny fandehan'ny Lalàna Fototra Mifehy ny Fanarenana. Tamin'ny fotoana nandraisan'ny DPJ ilay volavolan-dalàna, misy fehezanteny iray ao; tokony ampiasaina irery ihany amin'ny faritra tra-doza ilay tetibola. Kanefa nony tonga teo ilay solombavam-bahoaka “Diet ” avy amin'ny antoko DPJ-LDP-Komei , dia nanapa-kevitra izy ireo fa tsy tokony ho voafetra ny fampiasana io tetibola io. Noho izany tokony izy rehetra no homentsika tsiny.
[valinteny ho an'i 148] Efa ho roa taona izao no voakiana foana ny fitondrana tamin'ny fanodinkodinany vola fanampiana ho an'ny loza voajanahary. Araky ny hevitro, ny governemanta mihitsy no tokony homena tsiny amin'ny tsy fandraisany andraikitra manoloana ireo sampan-draharaha miandraikitra ny fampiasana izany vola izany. Tsy resaka fiandaniana izany. Ny fandaniana toy izany dia andraikitry ny governemanta. Tsy raharahan'antoko izany. Ny sampan-draharaha ao amin'ny governemanta no mpanaotao foana mandany vola tsy misy fanaraha-maso tahaka izany.
Tao amin'ny Twitter, i Nakano Takashi, izay nikarakara tetikasa iray tao an-tanànan'i Minamisoma, Fukushima mba hanohanana ireo tra-boina tamin'ilay horohorontany, dia nilaza fa tsy raharahan'antoko izany :
@wildft : Ireny tetibola azo tamin'ny fiakaran'ny hetra ireny, kanefa tsy nampiasaina araka ny tokony ho izy ; 2 miliara dolara, 1.2 miliara dolara, yen 10 miliara nampiasaina ho fanohanana an'i “yuru chara” ilay maskoôtim-paritra, nampahafantarana ny tanàna, nanamboarana ny làlam-pirenena, nanisàna sokatra, famokisan-tena. Izay tanàna rehetra nampiasàna ilay vola rehetra. Raha aravona izany, tomponandraikitra daholo isika rehetra.